ပဲခူးမြို့သည် နိုင်ငံ၏ အဓိက ကုန်စည်စီးဆင်းရာ လမ်းဆုံဖြစ်၍ စီးပွားရေးအရ မဟာဗျူဟာကျကြောင်း ? - Yangon Media Group
ပဲခူးမြို့သည် နိုင်ငံ၏ အဓိက ကုန်စည်စီးဆင်းရာ လမ်းဆုံဖြစ်၍ စီးပွားရေးအရ မဟာဗျူဟာကျကြောင်း ?
ပဲခူးမြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကကုန်စည်စီးဆင်းရာလမ်းဆုံပေါ်တွင် ကျရောက် လျက်ရှိကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းက ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ပြောကြားကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှသိရသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်အနေနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ တော်ဝင်ဟံသာခန်းမ၌ ပဲခူးမြို့ ပြည်ပစက်မှုနယ်မြေတွင် Sunjin Myanmar Co., Ltd မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”နောင်အနာဂတ်မှာ အာဆီယံလမ်းမကြီးများ၊ ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းများ ပေါ်ပေါက် လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပဲခူးမြို့နယ်ဟာ အဓိကကုန်စည်စီးဆင်းရာလမ်းဆုံပေါ်မှာ ကျရောက် လျက်ရှိ၍ စီးပွားရေးအရ မဟာဗျူဟာကျပါတယ်”ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်လည်း ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည့် အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် အခွင့်အရေးများကို လေး စားလိုက်နာကြစေလိုကြောင်းဆိုသည်။ ”မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အကျိုး ပြုရာရောက်တဲ့ တိရစ္ဆာန်အစာစပ်လုပ်ငန်း နဲ့ ကြက်သားပေါက်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်း တွေ ဆောင်ရွက်နေမှုဟာ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ ရရှိစေတဲ့အပြင် ပြည်တွင်းစိုက်ပျိုး/မွေးမြူ ရေးသမားတွေအတွက် အကျိုးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ဖို့ မိမိတို့အစိုးရအဖွဲ့ကနေ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကကုန်စည်စီးဆင်းရာလမ်းကြောင်းဖြစ်သော ရန်ကုန်- မန္တလေး၊ ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်လမ်းတို့သည် ပဲခူးမြို့ကို ဖြတ်သန်းလျက်ရှိသည့်အတွက် ပဲခူးဒေသသည် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အထူးစိတ်ဝင်စားခံရသည့်မြို့တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆိုထားသည်။
ထို့နောက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ တည်ထောင်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနှင့် Sunjin Myanmar Co.,Ltd တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး Sunjin Myanmar Co., Ltd မှ Executive Director, Mr. Sun Ho Hwang က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည့်အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတထံသို့ တိုင်ကြားစာများ
ဟင်္သာတမြို့တွင် ပန်းခြံဖြစ်မြောက်ရေး ဒေသခံ ၅ဝဝ ခန့် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်)စမ်းသပ်ခွင့်ပြုမှုကို တစ်နှစ်စီထပ်မံတိုးမြှင့်မည်
အာဆင်နယ်တွင် ၂၂နှစ်ကြာရှိခဲ့ခြင်းကိုနောင်တရမိဟု ဝင်းဂါးဆို
ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှ ယာဉ်မောင်းအား ခိုင်မာသည့် သက်သေ လေးချက်အရ တရားစွဲတင်ခြင်းဟု ဒုရဲချုပ် ဆို